यिनै हुन् हिजो चिसापानी पुलबाट हा’मफा’ल्ने तिन जना, एकजना अझै भेटिएनन ! – Namaste Host
April 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यिनै हुन् हिजो चिसापानी पुलबाट हा’मफा’ल्ने तिन जना, एकजना अझै भेटिएनन !
धनगढीः कैलालीको कर्णाली चिसापानी पुलबाट हा’म फा’लेर बे’पत्ता भएका कि’शोर अझै फेला परेका छैनन्। शनिबार जिल्लाको ल’म्किचुहा नगरपालिका वडा नम्बर २ का १८ वर्षीय सञ्जय खड्का कर्णाली नदीमा बे’पत्ता भएका थिए।
प्रा’रम्भिक अनुसन्धानबाट सुरुमा हा’मफाले’का सञ्जय खड्कालाई ब’चाउन लोकेश प्याकुरेल र बिरेन्द्र सिँह हा’मफा’लेको खु’लेको प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्टले बताए। चिसापानी पुलमा दैनिक टि’कटक ब’नाउनेहरुको भी’ड ला’ग्ने गरेको छ। तर उनीहरु भने कुनै भिडियो न’बनाइरहेको अ’नुसन्धानबाट खु’लेको छ।